ताप्लेजुङमा सेनाले बनायो गुफा जाने बाटो – Etajakhabar
ताप्लेजुङमा सेनाले बनायो गुफा जाने बाटो
तेह्रथुम । तेह्रथुमको म्याङ्लुङ बजार नजिकै रहेको दशकते सामुदायिक वन परिसरमा रहेको ऐतिहासिक टुङ्ना गुफासम्म पुग्नका लागि नेपाली सेनाले गोरेटो बाटो निर्माण गरेको छ ।
सेनाले ऐतिहासिक गुफासम्म पुग्न र अवलोकन गर्न चाहनेलाई सहज होस् भनेर बाटो निर्माण गरिदिएको जनाएको छ ।
म्याङ्लुङस्थित नेपाली सेनाको इन्द्रदल गुल्मका जवानले बाटो निर्माण गरिदिएको गुल्मपति महेश्वर कार्कीले बताए । यसअघि स्थानीयवासी राम तुम्बाहाङ्फेले निजी लगानीमा युवासहित टुङ्ना गुफा ओझेलमा रहेको भन्दै त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो बनाउने काम थालेका थिए ।
गोरेटो बाटोमा ५५ जनाभन्दा बढी नेपाली सेना र स्थानीयवासीले श्रमदान गरेका थिए । म्याङ्लुङस्थित बसपार्क नजिकै रहेको हावा खाने बरदेखि पाँच मिनेट पैदल हिँडेपछि पुग्न सकिने ओडार हुँदै हाङ्साम महादेव गुफासम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरिएको हो ।
म्याङ्लुङ बजारमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यो क्षेत्र राम्रो गन्तव्य बन्न सक्ने म्याङ्लुङ–९ का वडा सदस्य बाबुराम लिम्बूले बताए । उनका अनुसार यो क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थल बनाउनका लागि हालै सम्पन्न वडा परिषद्मा समेत बजेट माग गरिएको छ ।
यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले सिंहवाहिनी मन्दिर, बाघकोरे मन्दिर, नागा ओढार, थलायक डाँडा र गढी यक डाँडाको भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ११, २०७४ समय: २१:४३:३०
विश्वकप फुटबलमा आज हुने तिन खेलहरु ! यस्तो छ समय तालिका
स्वीडेनविरुद्ध गोल फर्कायो जर्मनीले, जर्मनले जित्नै पर्ने दवाव
जर्मनी र स्वीडेनबीचको खेलमा जर्मनीले पहिलो गोल, जर्मनीले खेल जित्न नसके जर्मनी घर फर्किने निश्चित
जर्मनीलाई हराउँदै सनसनीपूर्ण विजयी सुरूवात गरेको मेक्सिकोको लगातार दोस्रो जित, दक्षिण कोरिया फेरि हार्यो
एसईईको नतिजा आउन ढिलाई हुने, यस्तो छ कारण
एसईई नतिजा केहीबेरमा सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो नयाँ नियम अब नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पास हुने
करिब १ लाख तलव सुविधा पाउने गरि युरोपेली मुलुक माल्टामा नेपाली कामदारको माग आयो
‘सिमानासम्म थुतुनो मात्र घुसार्ने रेलको कुरा होइन याे, समृद्धिकाे नारा अकारण दिएकाे छैन’
एसइई परीक्षामा नियमिततर्फ ई’ ग्रेड र आंशिकतर्फ ‘ए प्लस’ कसैले ल्याएनन्
दीपिका र कट्रिनाबीच पानी बाराबार, पूर्वप्रेमीको चाहनाचाहिँ सँगै काम गर्ने
२४ वर्षीया सुन्दरीको सलमानसँग बिहे गर्ने चाहना
को हुन् विश्वकपमा म्याराडोना र रोनाल्डोसँग बराबरी गर्दै सनसनी मच्चाउने लुकाकु?
स्विडेनविरुद्धको खेलमा टोनी क्रुसले अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि जर्मनीले जित्यो, स्विडेन स्तब्ध